Iri nri Franchises maka ire | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Franlọ nri Franchises
Nchịkwa nri Franchise egosipụtara
Franchises nri ohuru
Ọmụmụ ihe nkiri Hot Dog
Kọfị Blue Franchise
Pụrụ Iche Franchise Ohere na Kọfị Blue! Ejiri kọfị kọfị azụmahịa e si n’ala gbagote ka ọ bụrụ ihe kacha mma ...
Jiri nri franchise nri mee ka agụụ ihe oriri gụ gị. Nye ọtụtụ, nri dị mma dị n’elu ndepụta ha ma a bịa n’ihe banyere ibi ndụ obi ụtọ.
Nri na ihe ọ Beụ theụ bụ mpaghara kachasị ukwuu na franchising. A ga na-enwe nri mgbe niile, ọbụlagodi karịa ka ọnụ ọgụgụ ndị nọ na mbara ụwa na-amụba n'ike n'ike.
Kedu ụdị nri nri nri ndị dị?
A bịa n'ihe banyere nri nri, ọ bụghị naanị ụlọ nri dịka McDonald's na Dominos, enwere ụdị dịgasị iche iche aha nri dị na nri na ihe ọ beụverageụ.
Franlọ oriri na ọ Restauranụ franụ ụlọ nri - mmadụ niile hụrụ ọmarịcha nri dị na ụlọ oriri na ọ theụ localụ dị na mpaghara, ya na ezigbo nri ma drinkụọ ihe ọ theụ theụ ndị ahịa hụrụ n'anya. Inye ndị ahịa afọ ojuju nke ndị ahịa, ndị ahịa ga-aga n’ihu ileta ụlọ oriri na ọ restaurantụ asụ gị dịka franchise ha na-erite uru na azụmaahịa ọzọ.
Were aha ọma - anyị niile na - eche ihu oge ebe anyị anaghị enwe nri ma ọ bụ n'oge ndị a ka anyị ga - ahọrọ ịpụ. Ebe enwere aha francises dị iche iche ịhọrọ site na, site na Indian Takeaway franchises rue Chinese na Pizza, gịnị kpatara ị ga - eji were mpaghara a nke dabara na ihe onye ọ bụla masịrị ya.
Ekwentị Mkpanaaka nri - enwere ụdị nri nri dị iche iche dị na ekwentị, site na ihe omume / ụlọ ọrụ, hog roasts, ọrụ nnweta nri ọhụrụ na igwe ịre ahịa.
Otu uru nke nri na ihe ọ beụverageụ ọchụ franụ bụ bido ịbara onwe gị uru, mana ọbụghị n'onwe gị.
Mgbe ị itinye ego na njiri mara nri, ọ bụrụ aha nri ma ọ bụ akara nri obodo, franchisor ga-ewetara gị ihe niile ịchọrọ ịpị n'ala. A na-etinyekarị ihe ndị a na ntinye aka na aha franchise ma tinye akara ụgbọ / akara ụlọ oriri na ọveryụ ,ụ, uwe ndị ọrụ, sistemụ EPOS, ngwanrọ ngwaahịa na enyemaka na nhọrọ saịtị. Mwepụta ọrụ na akụrụngwa enyere dị iche site na aha rue ahaaka yabụ hụ na ị ga-elele nke a edepụtara na akwụkwọ aha tupu ịzụrụ.
Chọgharịa site na ohere nri na ihe ọ beụverageụ nri dị iche iche n'ime akwụkwọ nri Franchiseek n'okpuru.